Accueil > Gazetin'ny nosy > Ambatondrazaka : Nidoboka am-ponja ny ben’ny tanàna
Miteraka resabe any Ambatondrazaka ny raharaha. Natolotra ny fampanoavana teo anivo’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Ambatondrazaka ny ben’ny tanàna ao an-toerana, Roger Ratianarivo izay voafidy tamin’ny anaran’ny IRD, sy ny olona 11 hafa, ny alarobia teo, ka avy hatrany dia nampidirina am-ponja vonjimaika ny 10 tamin’izy ireo, isan’izany ny ben’ny tanàna. Nahazo fanaraha-maso ara-pitsarana (sous surveillance judiciaire) kosa ny olona roa tafiditra ao anatin’ireo voampanga izay talem-paritry ny ministeran’ny mponina ny iray.
Vesatra anenjehana ireto olona folo naiditra am-ponja vonjimaika ireto ny fambolem-bary tao anatina faritra arovana antsoina hoe “site Ramsar” izay manamorina ny farihin’Alaotra. Tsy ilay fambolena vary loatra no heloka nataon’izy ireo fa ny fandoroana zetra tao amin’io faritra arovana io. Tsy afaka nambolena mantsy ny vary raha tsy nodorana daholo aloha ireo zetra. Zava-maniry tahaka ny zozoro moa ny zetra ary hipetrahan’ny Bandro, biby tsy hita raha tsy ao amin’ny farihin’Alaotra ary arovana mafy satria mitady ho lany tamingana.
Marihana fa ny VOI (Vondron’olona ifotony) izay fikambanana mpiaro ny tontolo iainana no nitory ireo olona ireo teo anivon’ny fitsarana. Raha ny fantatra moa dia mbola misy tompon’andraiki-panjakana hafa no tokony ho voakasika amin’ity raharaha ity, saingy tsy voakitikitika mihintsy aloha hatreto. Tsara ny manamarika fa tamin’io andron’ny alarobia io ihany dia olona hafa miisa valo no nomelohan’ny fitsarana sazy dimy taona an-tranomaizina noho ny fanimbana ireo zetra manamorona ny farihin’Alaotra.